RASMI: Barcelona Oo Warbixin Caafimaad Ka Soo Saartay Mid Ka Mid Ah Xidigaha Kooxdeeda Ee Dhaawacmay. - Gool24.Net
RASMI: Barcelona Oo Warbixin Caafimaad Ka Soo Saartay Mid Ka Mid Ah Xidigaha Kooxdeeda Ee Dhaawacmay.
Kooxda Barcelona ayaa hadda warbixin caafimaad ka soo saartay dhaawicii difaaca kooxdeeda ee Samuel Umtiti ku soo gaadhay xulkiisa France. Umtiti ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay magaalada Barcelona kadib dhibaato soo gaadhay.
Samuel Umtiti ayaa musiibo kale oo waayihiisa ciyaareed sii xumayn karta dhex galay kadib markii uu tan iyo xili ciyaareedkii hore ku soo jiray dhaawacyo u diiday in uu shaxda Valverde boos ka heli karo.
Dhaawac muddo dheer soo haystay Samuel Umtiti ayaa sabab u noqday in Valverde uu ku tiirsanaaday Gerard Pique iyo Clement Lenglet iyada oo dhaawaca cusub ee Umtiti soo gaadhay uu xalaadiisa sii xumayn doono.
Warbixin caafimaad oo ay Barcelona soo saartay ayaa lagu yidhi: “Baadhitaano maanta oo isniin ah lagu sameeyay Ciutat Esportiva waxay muujiyeen in ciyaartoyda kooxda kowaad ee Barca ee Samuel Umtiti uu cagta ka burburay, waxaana soo laabashadiisa go’aamin doonta soo kabashadiisa”.
In Barcelona ayna sheegin muddada uu Umtiti ku soo laaban karo ayaa walwal wayn ku abuuraysa xidiga reer Frnace iyo macalinkiisa Valverde oo doonayay in qorshihiisa xili ciyaareedkan cusub uu qayb ka noqdo.
Inta badan Barcelona ayaa warbixinteeda caafimaad ku sheegta muddada la filayo in ciyaartoyga dhaawacmay uu soo laabto, laakiin Samuel Umtiti ayaan loo qaban muddo uu soo laaban karo.
Samuel Umtiti ayuu dhaawacani ku soo gaadhay waajibaadka xulkiisa France laakiin waxaa xusuus mudan in aanu hal daqiiqo ka ciyaarin kulankii isreeb reebka Euro2020 ee xulka France ay guusha ka gaadheen Albania.
Ernesto Valverde ayaa hadda ku sii tiirsanaan doona Pique iyo Lenglet oo uu guud ahaan xili ciyaareedkii la soo dhaafay ku soo shaqaynayay halka dhaawaca Umtiti uu sii kordhiyay ciyaartoyda miiska daawaynta Barca ku mashquulsan.
Marka laga yimaado dhaawaca cusub ee Samuel Umtiti, waxay Barcelona sugaysaa in Lionel Messi, Luis Suarez iyo Ousmane Dembele ay dhaawacyo kala duwan ka soo laabtaan halka xaalada Nelson Semedo ay ku biirtay dhaawcyadan.